Askarigii dilay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska oo xukun dil ah lagu riday (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Askarigii dilay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska oo xukun dil ah lagu riday (SAWIRO)
Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku riday Axmed C/laahi Cabdi oo ah askarigii ku eedeysnaa inuu dilay wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dib u dhiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Allaha u naxariistee Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji.
Axmed C/laahi Cabdi oo illaalo u ahaa hanti dhowrkii guud ee hore Nuur Faarax Jimcaale ayaa lagu helay dambi ah inuu isaga furay rasaastii uu ku geeriyooday wasiirkii hore ee howlaha guud Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji.
Sidoo kale, maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa amartay in la fasaxo Cismaan Salaad Barre, kadib markii wax dambi ah lagu waayay.
Cismaan Salaad Barre ayaa isna ka tirsanaa illaalada hanti dhowrkii guud ee hore Nuur Faarax Jimcaale, waxaana isna loo heystay dilkaas.
Gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute oo xukunta maxkamada ku dhawaaqay ayaa sheegay in eedeysanaha racfaan ka qaadan karo xukunka lagu riday hadii uusan ku qanacsanayn.
Hoos ka aqriso xukunkii ay riday maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya:-